Sagalee QEERROO Bilisummaa Oromoo Hagayya 27, 2015 -
4 thoughts on “Sagalee QEERROO Bilisummaa Oromoo Hagayya 27, 2015”
Qeerroo abdin bilisummaa dhuhumman issinumma!
Qeerroo jabaadha sagaleen keessan keenya!!
Qeeerroo qophiin bishaan dheebote,budeena beelaye, abidda dhaamotee jedhu haalaan qophii gaarii waan ta’eefuu oromoon hundi odoo dhageeffatee gaarii jedha.irra deddeebi’aati nuu dhihyeessa.
Bokka Bilbil says:
Honne nama cabsaa. Haa ta’u iyyuu male warrii nutti garagalaan daga’uu qabu. Bayy’ee garii dha.